Xafiiska ururka kubadda cagta Hirshabeelle oo maanta xarigga laga jaray… + SAWIRRO – Gool FM
Haaruun May 26, 2019
(Jowhar) 26 Maajo 2019. Waxaa gelinkii dambe ee maanta xarigga looga jaray Magaalada Jowhar xafiiska ururka kubadda cagta ee Maamulka Hirshabeelle.
Waxaa xafiiskan si wadajir ah xariga uga jaray Wasiir ku xigeenka isboortiga Maamulka Hirshabeelle, Cumar Maxamed Cumar iyo Guddoomiye ku xigeen arrimaha horumarinta gobollada Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda cagta, Abuukar Isloow Xasan.
Munaasabadda waxaa sidoo kale goobjoog ahaa xubno ka socda xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, maamulka xiriirka Kubadda cagta Hirshabeelle, xubno ka socday wasaaradda dhalinyada ee maamulka Hirshabeelle iyo marti sharaf kale.
Xafiiskan maanta xariga laga jaray waxaa qalabeeyey Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, Guddoomiye ku xigeen arrimaha horumarinta gobollada Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda cagta, Abuukar Isloow Xasan ayaana halkaas ka jeediyey hadallo uu ku muujiyey in xiriirka kubadda cagta Soomaaliya uu garab taagan yahay ururka kubadda cagta Hirshabeelle.
Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay Wasiir ku xigeenka isboortiga Maamulka Hirshabeelle, waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in ururka kubadda cagta Hirshabeelle maanta uu yeesho xafiis uu ku shaqeeyo oo aad u qalabaysan.
Dhinaca kale Guddoomiye ku xigeen arrimaha horumarinta gobollada Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda cagta, Abuukar Isloow Xasan ayaa sheegay in wixii uu xafiiskan u baahan yahay uu diyaar u yahay inuu fuliyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, isla markaana ay tababaro u qaban doonaan ururka kubadda cagta maamulka Shirshabeelle.
Guddoomiye ku xigeen arrimaha horumarinta gobollada Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda cagta, Abuukar Isloow Xasan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa shalay gaaray Magaalada Jowhar kaddib markii ay ka ambabaxeen Magaalada Muqdisho.
Xafiiskan maanta xariga laga jaray ee uu ku shaqeyn doono ururka kubadda cagta ee maamulka Hirshabeelle ayaa lagu qaban doonaa wax waliba oo ku saabsan horumarinta kubadda cagta, gaar ahaan kubadda cagta Maamulka Hirshabeelle.
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa u taagan sidii uu u horumarin lahaa kubadda cagta gobollada, waxaana ay horay xafiiska mid kan la mid ah uu xiriirku ka furay magaalada Baydhabo kaasoo uu ku shaqeyn doono Ururka kubadda cagta Koonfur Galbeed.
Miyuu laacibka khadka dhexe ee kooxda Chelsea, N'Golo Kante seegayaa Final-ka Europa League?